IiNkqubo zoYilo lweMizobo: Ezona Nkqubo zoYilo lweMizobo ziBalaseleyo | Creatives Online
Enkosi kwinkqubela phambili emangalisayo yetekhnoloji, ziya zisanda iinkqubo okanye isoftwe isenza kube lula ukuba sisebenze. Kushishino loyilo lwegraphic, kuye kwafuneka ukuba bahlaziye kwaye baphuhlise isoftware ukuvumela ukuba uninzi lweeprojekthi esizaziyo namhlanje zenziwe ngempumelelo enkulu.
Kule posi asifuni nje ukuba ubuyele kwihlabathi lezinto zegraphic, kodwa kwakhona, siza kukubonisa ezinye zezona nkqubo zibalaseleyo zoyilo lwegraphic ezisetyenziswayo ngoku kwaye ezingaphumanga kwisitayile.
1.1 I-Adobe Photoshop CC
1.6 Umzobo weCorel
1.7 Ivenkile yepeyinti Pro
1.8 Isiqendu Studio
1.11 Umyili weGravit
Siyaqonda ukuba, inkqubo yoyilo lwegraphic, sisixhobo esisivumela ukuba siphinde sichwetheze okanye silungise imifanekiso, yenza imizobo, kwaye uyigcine kamva kwiifomathi ezahlukeneyo.
Xa sibhekisela ekutshintsheni okanye ekuguquleni, sithetha ukongeza okanye ukususa iinxalenye zomfanekiso, ukugqithisa imifanekiso phezulu komnye nomnye, ukubuyisela imibala okanye imigca, ukuguqula ukukhanya kunye nokuchasana, ukulinganisa, ukucinezela umfanekiso ukuba uthathe indawo encinci njengefayile , gcina umfanekiso ngenye ifomathi, faka izihluzi eziguqula umfanekiso, usike inxalenye yomfanekiso, kunye nolunye ucociso oluthi ngamanye amaxesha luxhomekeke kwinkqubo esiyisebenzisayo.
Nalu uluhlu olubanzi lwezo nkqubo ziye zagqama ekuhambeni kwexesha:
I-Adobe Photoshop CC
Ngaphandle kwamathandabuzo, asikwazanga ukuqalisa uluhlu ngaphandle Photoshop. I-Adobe Photoshop ihlala iyinkokeli kwipodium yezixhobo zoyilo, njengoko sisixhobo esipheleleyo, ngenxa yezibonelelo ezibonelela ngayo kunye nezinto ezingenakubalwa ezinokwenziwa ngayo.
Phakathi kwazo zonke iimpawu zayo singongeza ukuba: ikuvumela ukuba uphucule iifotongokunjalo yenza imizobo ye-3D kunye nemifanekiso. Ukongeza, ayipheleli kwibala lemifanekiso, kodwa ikwahlela iividiyo kwaye ilinganisa izakhelo zokwenyani. Kufuneka yongezwe ukuba kulula ukuyisebenzisa, nakubasebenzisi abasaqalayo kuba yinkqubo enomdla kakhulu kwaye ikunika iitemplate ezahlukeneyo.
Ukongeza, unokufikelela kwinkqubo apho unokwenza yonke imisebenzi yoyilo lwegraphic kunye nokusebenzisa ubuchule bakho, ungadala iziphumo ezinomdla kakhulu.
Umthombo: Ihlabathi lePC
Esinye isixhobo esihamba kunye ne-Adobe yi-Illustrator. Sesinye sezixhobo ezithi, ivumela ukwenziwa kweelogo zebhrendi yakho, kunye nemizobo, iifonti kunye nemifanekiso. Le software igxile kwimizobo yeVector onokuthi ngayo wenze yonke into ukusuka kwii-icon zakho zewebhusayithi yakho ukuya kwimifanekiso yeemagazini, iincwadi kunye neebhilibhodi.
Ikwadume kakhulu ngokusetyenziswa ukwenza imizobo engakholelekiyo kunye neepowusta. Ukuba uyalithanda ilizwe lomzobo kwaye awazi ukuba sesiphi isixhobo onokuthi usisebenzise, ​​esi sesona sifanelekileyo. Enkosi kwiipakethi zakho zebrashi, unokwenza imizobo engapheliyo ngendlela yakho.
Umthombo: La Hauss
Sivala le phakheji ye-Adobe nge-InDesign. I-InDesign sisixhobo esigqibeleleyo se-Adobe somsebenzi wokuhlela wedijithali, njengoko kunjalo iyakunceda ukucwangcisa amaphepha kunye nokwenza ukwakheka kweetekisi.
Sisixhobo esifanelekileyo sokwenza iincwadana, iimagazini kunye neencwadi kwiifomathi zedijithali kunye nezomzimba. Kwi-InDesign unokwenza amaxwebhu asebenzisanayo kwi-intanethi njengoko ikuvumela ukuba udibanise iintlobo ezahlukeneyo zeaudio, ividiyo, isilayidi okanye iifomati zoopopayi.
Ukuba i-arhente yakho yokuthengisa inesebe lokuhlela, ngokungathandabuzekiyo iya kuba sisixhobo esilungileyo sokuhlangabezana neemfuno zakho. Kwakhona, ukuba ufuna ukwazi ngakumbi ngesi sixhobo, siyakumema ukuba ufikelele kwezinye izifundo esizenzileyo kwaye onokuqhubeka ngazo ukufunda.
Ukuba sisuka kude nehlabathi le-Adobe, sifumana esinye sezixhobo ezingenasiphelo ezikhoyo ukuyila. I-Sketch yisoftware ekhethekileyo esekwe kwivector yeMac.
Ukuba ufuna isixhobo esifanelekileyo sokwenza ii-icon okanye ujongano lweewebhusayithi kunye nosetyenziso lweselula, Le nkqubo iya kuba ngumhlobo wakho kunye nomhlobo osenyongweni.
Eyona nto ingcono kakhulu, i-interface yayo ilula kakhulu ukulawula kunye nokuhamba, ngoko ke ukuba ungumqali kolu hlobo lweqonga loyilo, unokuyilawula ngokusetyenziswa okuncinci kakhulu.
I-Affinity inokuthathwa njengeyona ingabizi kakhulu kwaye kulula ukuyisebenzisa inguqulelo ye-Adobe's graphic design programmes. Nangona kunjalo, ixabiso layo aliphazamisi umgangatho womsebenzi kunye nesimbo esinikezelwa yile software emangalisayo.
Ndiyabulela kwi-interface enembile, izixhobo zayo kunye nemisebenzi Zingasetyenziswa ngumyili wokuqala, kodwa kunye nomculi onamava.
I-Corel Draw yasungulwa ngo-1992 kwaye ibe isimboli somgangatho ukususela ngoko. I-Corel ikunika yonke into Izixhobo ze yenza imizobo yeVector kwaye uhlele iifoto zakho. Inojongano olubonakalayo, ii-tutorials, amaqhinga kunye nezixhobo ukuze ufunde ngokukhawuleza ukuyiphatha.
Ikwanayo neminye imisebenzi efana nokulungelelanisa izinto kunye nokusebenza ngamaphepha amaninzi ngexesha elinye. Ukongeza, sele ikhona kwiMac.
Ngolunye ukhetho olukhulu ukuba uyalithanda ilizwe lomzobo. Yongeza umbala kwimizobo yakho ngezixhobo ezinikezelayo kwaye ufunde ngakumbi malunga nokuzoba kunye nokuhlela imifanekiso.
Esi sixhobo sibizwa ngokuba yiPaint Shop Pro yeyona ndlela ilungileyo yokuhlela ifoto yobuchwephesha, amaxabiso ayo afikelelekayo kakhulu kunezinye iinkqubo zoyilo lwegraphic kwaye inovavanyo lweentsuku ezingama-30.
Ngale nkqubo, uya kwenza uyilo olunomdla kakhulu ngoncedo lwezixhobo zobukrelekrele ezenziwe njengePic-to-Painting, esebenza kwiinethiwekhi ezikhethekileyo ze-neural xa uhlalutya ifoto.
Unokusebenzisa iitemplates zabo kumakhadi okubulisa, izibhengezo, iincwadana, imifanekiso yeintanethi zentlalo kunye neentlobo ezininzi zezinto ezibonakalayo zewebhu kunye nokuprinta. Isixhobo sinendawo yokuchukumisa, yenziwe lula kakhulu ukuba siyisebenzise, ​​nto leyo eya kwenza lula imisebenzi yakho ukuze ufumane iziphumo ezigqwesileyo.
Isitudiyo sekliphu, yinkqubo yokuzoba yedijithali eguquguqukayo kakhulu kwaye idumile phakathi kwamagcisa avela kumacandelo ahlukeneyo anjengomfanekiso, iicomics, manga kunye noopopayi. Inokulungelelaniswa kweentlobo ezahlukeneyo zeebrashi kwaye inikezela ngamava afana nokuzoba ngepensile ephepheni, kodwa nazo zonke iingenelo zokwenza oko ngokwedijithali.
Isitudiyo seClip sifanelekile kubazobi abazinikeleyo ubugcisa bomgca kwaye sisixhobo ekulula ukusisebenzisa esikwabandakanya imifuziselo ye-3D. Inexabiso elifikelelekayo kakhulu kwaye Inoguqulelo lwasimahla lweentsuku ezingama-30.
Ukuba unayo i-iPad, le nkqubo yenye yezona zinto zibalaseleyo zokuzoba kunye nokupeyinta. Ijolise kumagcisa kunye nabaqulunqi abafuna inani elikhulu leebhrashi ukuze zilungele phantse nayiphi na indalo, ukusuka kwisiseko sokuzoba, ukuzoba, ukupeyinta, i-airbrushing, i-calligraphy, kunye namalahle ukutshiza ukupeyinta. Kubandakanya izixhobo ezifana ne-QuickShape kunye ne-StreamLine.
IVectr yinkqubo yasimahla elungele abaqalayo kuyilo lwegraphic kwaye eyona nto ingcono kakhulu, iyafumaneka kuso nasiphi na isixhobo, ukuze ugqibezele iprojekthi yakho yobugcisa naphi na apho ukhoyo.
Phakathi kweempawu zayo yi-interface enembile kunye nelula ukuyisebenzisa, ukudibanisa kwayo ne-WordPress kunye nokudibanisa kwayo kunye neenkqubo ezininzi zokusebenza ezifana neWindows, macOS, ChromeOS okanye iLinux.
uMyili weGravit, yinkqubo yoyilo lwegraphic iquka izixhobo zokwenza imifanekiso yevektha, yenza iimontages kunye namagqabantshintshi ephepha, kunye neziphumo ezahlukeneyo zeefoto. Kuyacetyiswa ukuba usebenza ukwenza izinto zokuthengisa, iiwebhusayithi, ii-icon, uyilo lojongano lomsebenzisi kunye neentetho okanye umxholo wenethiwekhi yoluntu.
Umyili weGravit uqhuba ngaphandle komthungo kwiiplatifti zeWindows, macOS, Linux, kunye neChrome OS. Inokusetyenziswa kwi-intanethi, kwisikhangeli, okanye nangaphandle koqhagamshelo lwe-intanethi kwi-desktop app ukuba uhlawulela inguqulelo yepro.
Singayichaza i-Behance, ngokungathandabuzekiyo ifana ne-LinkedIn yabayili bemizobo, abadwebi bemifanekiso kunye nabafoti, yenye yezona nethiwekhi zaziwayo zokukhuthaza amagcisa kwihlabathi jikelele. Ukuba yi-Adobe, kule ndawo unokufumana ikhulu leephothifoliyo zamagcisa avela kwihlabathi jikelele ukuze ufunde kancinci ngomsebenzi wabo kwaye uphefumlelwe. Ukuba uyanqwenela, unokwenza iakhawunti yakho ukuze wabelane ngezinto ozifundileyo kwaye ukhuthaze ubugcisa bakho.
Njengoko igama layo lisitsho, iBrandemia yibhlog yesiSpanish egxile kwintengiso okanye isazisi senkampani. Ngendlela edidactic, iqonga libonisa umzekelo wophononongo lweempawu ezaziwayo, uphononongo lwemihla ngemihla, udliwano-ndlebe kunye neentlobo ngeentlobo zezibonelelo.
Isiza sibonelela ngeendaba ezisexesheni ezivela kwihlabathi lezazisi zenkampani, iingcebiso zoncwadi, iminyhadala, iikhosi, kunye namabhaso. Uya kufumana zonke iintlobo zolwazi kunye nezinto ezinomdla. Ngaphandle kwamathandabuzo, yindawo yokuhlangana kunye nenkuthazo yabalandeli bophawu kunye nohlalutyo lokwakhiwa kwe-brand.
Ngoku ekubeni ufikelele kweli nqaku kwinqaku, awusenasizathu sokungaqalisi ukudala nokuphuhlisa uyilo lwakho lokuqala. Yiyo loo nto sikumema ukuba uqhubeke nokuzazisa kwaye ufumane izixhobo ezingakumbi ezishiyekileyo ecaleni kwendlela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Iinkqubo zoyilo lwegraphic